बिचार – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
पोखरा, २४ आश्विन २०७७: दिपक तामाङ्ग प्रायः साझा सबैजना उदेश्यबिहिन हुन्छन अर्थात लक्ष्य बिहिन । किनकी सबैले आफ्नो समय निन्द्रदेवीको लागि छुट्टाईसकेका हुन्छन् । शारीरिक थकान र मानसिक तनाबलाई बन्दी बनाएर आफू एक अल्कल्पनीय संसारमा रमाउन आतुर हुन्छन् । तर त्यही समयमा एक युवक (अर्थात म) आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म हजारौं जुक्ती निकाल्न लागिरहेको छु मानौ आइन्टाइन बन्न लाग्दै छु । केही आफ्नै मान्यतालाई तोड्दै छु । सुनसान रातमा । जुन ताराको बाहेक सायद अरु कसैको आखा म माथी परेको थिएन । परे पनि म तिनलाई वास्ता गरेकै थिएन । किनकि…
पोखरा, १२ श्रावण २०७७: दीपक तामाङ्ग सरकारले लकडाउन खुकुलो बनायो । मान्छेहरू खुशी खुशी हिड्न थाले मानौ बर्षौदेखी उ हिड्न पाएको थिएन । भनौ यो भन्दा पहिला पखेटा काटेको चरा जस्तै थियो उ । तर अहिले छैन । उ उड्न सक्ने भएको छ । डुल्न सक्ने भएको छ । त्यसैले त डरलाई पाच कदम पछाडि राखेर निर्धक्क हिडिरहेका छन । तर म संकोच मान्दै बाध्यताले बिहान 45 र साझा 45 गरि 90 मिनेट हिड्दो रहेछु । दिउँसो कहिलेकाही 20-30 मिनेट हिड्दो हो । बाकी समय दुई पाङ्ग्रेको पछाडी बसेर कार्यस्थल…
काठमाडौं २५ असार २०७७: आदिवासीवादबारे केही कुराहरु मेरा अघिल्ला लेखहरुमा पनि उल्लेख भईसकेको भए त पनि यो दर्शन त्यत्तिमा मात्र सिमित थिएन किनकि आदिवासीवाद दर्शन कुनै जड दर्शन नभएर निरन्तर विकास हुने दर्शन हो। यसको निरन्तर विकास,निरन्तर प्रयोग र निरन्तर रक्षा जरुरी छ।जो हामीले गर्नेपर्छ। यस लेखमा मैले आदिवासीवादको तत्व मिमांसा,ज्ञान मिंमासा,आचार मिंमासाबारे र आदिवासीवाद दर्शनका चार अंगहरु बहुलराष्ट्रवाद,संघीयवाद,सामूदायिक समाजवाद र वैज्ञानिक प्रकृतिवादबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। क) आदिवासीवादको तत्वमिमांसा,ज्ञानमिंमासा,आचारमिंमासाबारे: १)आदिवासीवादको तत्वमीमांसा:तत्वमिंमाशाले कुनै चीजको सृष्टि कसरी हुन्छ वा त्यसको तत्वहरु के के हुन सक्छ?भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने गर्दछ।…
June 12, 2020 June 12, 2020 सरोकार संवाददाता
केशबराज चौंलागाँई ३० जेठ । आत्मा निर्भर कृषि भनेर समवन्धित निकायहरु ढ्वाङ पिटिरहेका छन । उता कृषकहरु दिनानुदिन पर निर्भर बनाईंदै छ । देश काल परिस्थिति, भुगोल, हाम्रो रितिथिति परम्परा आदिलाई पटक्कै वास्था नगरेर मुर्खता शव्दको अपमान हुनेगरी हामी मुर्खता गरिरहेका छौं । विशेषगरि पहाडी भुभागमा प्रत्येक घरमा एकहल गोरु हुन्थे, थोरै जग्गा हुनेहरुले एक, एकवटा गोरु पालेर हल वांधेका हुन्थे । स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरेर हलो जुवालगायतका औजारहरु तयार गरिन्थ्यो । श्रम वाहेक लगभग शून्य लागतमा चलेको थियो हाम्रो कृषि प्रणाली । एकजना हली भए जमीन जोत्ने कार्य सम्पन्न…
काठमाण्डौ: २९ जेष्ठ २०७७: ताम्सलिङ के हो?: ताम्सालिङ तामाङ जातिको ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक निरन्तरता, भूगोल, जनसंख्या लगायतको आधारमा प्रस्ताव गरिएको एक नयाँ राज्यव्यवस्था हो । तर यस राज्यमा तामाङ जाति बाहेक अन्यलाई बराबर रुपमा सत्ता सन्चालन गर्न दिईनेछ। यसलाई बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रिक विधीअनुसार सन्चालन गरिनेछ वा गरिनुपर्दछ। ताम्सालिङ प्राप्तिको सघंर्ष सदियौंदेखि राज्यले योजनाबद्व रुपमा उत्पिडनमा पारेको वा पारिएको समूदायलाई माथि ल्याउँनु वा पुर्याउँनुसँग सम्बन्धित छ। ताम्सलिङ किन चाहिन्छ?: क) उत्पिडित जातिहरुको खोशिएको सत्ता पुनर्स्थापना गर्नको लागि।ख) जातीय उत्पिडन अन्त्य गर्नको लागि।र राज्यद्वारा योजनाबद्व रुपमा दमनमा पारिएको जातिको पहिचानको लागि वा अात्मगौरवको लागि।ग)…
मोहन कुमार तामाङ्ग पोखरा, ११ बैशाख २०७७: आजभन्दा करिब २२ वर्ष अघि। घाम आफ्नो बालपनसग रमाउदै थियो अरे । हावा पनि सधै झै आफ्नैपनमा रमाउदै थियो अरे तर घरिघरी अल्छि मान्दै त्यसैले आभास गर्न सकिन्थ्यो रे कि हावाले पनि कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरिरहेको छ।विचारा! नलागोस पनि कसरी? पानीलाई आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य बनाउने त्यो चिसोमा, घामको न्यानोसग आनन्दले बस्न कसलाई पो मन लाग्दैन र? तर त्यसो भन्दैमा हामिले जस्तो हावाले कहाँ आफ्नो जिम्मेवारी, अनुशासनको उलंघन गर्न सजिलै छुट पाइन्छ र? त्यसैले जसोतसो आफ्नै लयमा बहकिदै थियो अरे ।माघको त्यो चिसो…